6 Toetra mampiavaka ny tena mahery fo - Blog
6 Toetra mampiavaka ny tena mahery fo
Te-hiantso moratorium momba ny fomba fanao ankehitriny amin'ny fanondroana ny olombelona rehetra ho 'mahery fo' aho.
Eny ary, angamba nanitatra kely aho. Saingy tokony hanaiky ianao fa tena nanalefaka ny hevitra hoe 'mahery fo' isika amin'ny vanim-potoana maoderina.
Andao hiantso azy hoe 'Inflation Heroism.' Hahomby izany mandritra ny fotoana fohy. Fa inona no tiako holazaina eto an-tany?
Atolotro fa very ny hevitry ny mahery fo. Azo antoka fa very ny dikan'ny maherifo tany am-boalohany.
Andao hizaha izay tena mahery fo. Inona no mahatonga ny mahery fo? Matetika sa tsy fahita firy ireo mahery fo? Voahodidin'ny mahery fo ve isika, sa mila mitady azy ireo? Efa nanana mahery fo foana ve isika, sa vao tonga ireo mahery fo?
Mahasoa matetika ny manomboka amin'ny fahatakarana fototra alohan'ny hidiranao amin'ny ahidratsy. Andao hojerentsika izay dikan'ny teny hoe 'mahery fo'.
Ny HERO dia olona manana fahasahiana sy fahaizana miavaka, mendri-piderana amin'ny asany be herim-po sy toetra mendrika. Ny olona izay, amin'ny hevitry ny hafa, dia manana toetra mahery fo na nanao fihetsika mahery fo ary noheverina ho maodely na filamatra.
Mikasika ireo Maherifo taloha
Tany amin'ny tontolo taloha, fantatry ny rehetra ny atao hoe mahery fo. Natao sampy ireo maherifo. Matetika izy ireo dia notompoina toy ny andriamanitra. Betsaka ny anaran'ireo maherifo sahala amin'ny andriamanitra taloha no ho fantatra. Anarana toa Achilles, Odysseus, Perseus, ary Hercules.
ny fomba hampijanonana ny fitiavako olona tsy tia anao
Ireo maherifo taloha dia nirona hanaraka ity boky ity. Nisy maningana indraindray, fa raha ny fitsipika dia mazàna manana ireto toetra manaraka ireto ny maherifo taloha:
Nanao ny asany maherifo izy ireo ho voninahitry ny tena manokana.
Nanao ny asany maherifo izy ireo mba hahazoany voninahitra mandrakizay.
Tsy dia tia mifampiresaka izy ireo amin'ny ankapobeny, fa mizaka tena.
Matetika izy ireo dia nitady zavatra hahazoana tombontsoa manokana.
Mazava ho azy, matetika ny tombony azo amin'ny hafa vokatry ny fihetsik'ilay maherifo. Navoaka ireo firenena, nesorina ny ozona, azo antoka ny harem-pirenena, avotra ny ainy.
Na dia fihetsika feno herim-po sy hery ary fahavononanana aza matetika ny zavatra nataon'izy ireo… dia tsy dia natao hamonjy ny olombelona izy ireo. Tany ivelany izy ireo no namonjy ny tenany.
Farany, tokony ho fantatsika fa ireo maherifo nentim-paharazana dia 'maherifo' matetika. Izany hoe nanana ny fahaizan'olombelona sy ny fahaizany lehibe izy ireo. Tsy inona izany fa ny kianja filalaovana haavo. Maherifo matetika ireo maherifo taloha satria namboarina ho azy ireo ny tokotanin-tsambo.
Ary ireo maherifo taloha dia tsy mba andriana toa izay noeritreretintsika. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanana lesoka lehibe iray farafaharatsiny. Ny sasany nanana bebe kokoa.
Mazava ho azy, maro ny mahery fo taloha tsy tena nisy. Maherifon'ny folklore ihany izy ireo. Ary ny maherifo tena izy dia matetika no nita ny angano rehefa notantaraina sy notaterina nandritra ny taranaka maro ny tantarany.
Ireo 'maherifontsika' maoderina dia mitovy amin'ny mpanao tantara foronina taloha fa tsy mahery fo mitono. Fa mazava ho azy, fantatsika rehetra fa ny maherifo dia olo-malaza amin'ny tantara foronina fotsiny. Tsy tena izy ireo ary tsy nisy velively.
Aiza ireo maherifo maoderina?
Ka lasa aiza daholo ireo mahery fo? Inona no nanjo an'ireo lehilahy sy vehivavy ireo izay lehibe kokoa noho ny fiainana? Iza no nanao asa lehibe? Iza no niavaka herim-po sy tanjaka ? Iza no nanao izay tsy nety nataon'ny hafa na tsy vitany?
Aza manahy. Izy ireo rahateo. Ny tena mahery fo dia nosoloina olon-tsotra.
Niala tamin'ny TSY MISY HEROES izahay ka lasa daholo ny olona rehetra! Toa mila mahery fo ny olona. Ka dia nahita karazana zaridaina vitsivitsy hijoroana ho an'ny tena mahery fo izahay.
Nahazo amboara izy ireo tamin'ny fahazoana ny tompon-daka. Ankehitriny dia manome amboara ho an'ny fandraisana anjara izy ireo. Nanome mari-pankasitrahana noho ny fahamboniana sy fahombiazana lehibe izy ireo. Ankehitriny dia manome loka izy ireo amin'ny fisehoana fotsiny!
Androany… ny ray dia mahery fo. Mahery fo ny reny. Maherifo ny mpampianatra. Maherifo ny miaramila. Maherifo ny polisy. Maherifo ny dokotera. Mahery fo ny olona manana aretina. Mahery fo ireo mikarakara ray aman-dreny be taona.
Mahery fo ny ray aman-dreny mitaiza. Maherifo ny ray aman-dreny manangana. Mahery fo ireo mi-tweet Maherifo ny mpilalao sarimihetsika. Ireo izay manana asa mampidi-doza dia mahery fo. Ary mitohy izany.
Fony aho tany amin'ny lisea (efa lasa ela), ny bokin-taonantsika dia nahitana endrika nantsoina hoe 'Senior Superlatives.' Ireo dia antitra vitsivitsy izay niavaka tamin'ny sokajy voafantina. 'Mpivady tsara indrindra,' 'Azo inoana fa hahomby,' 'Atleta tsara indrindra,' 'Matsilo indrindra.'
rehefa misy mandainga amin'ny tavanao
Tsy fantatro raha mbola nanao an'io karazan-javatra io izy ireo, fa raha manao izany izy ireo dia miahiahy aho fa ny mpianatra rehetra dia ho mpanelanelana amin'ny SASANY tsara fanahy
'Azo inoana indrindra hahazoana diplaoma,' 'Ny andrana indrindra ho an'ny ekipa Varsity,' 'Akanjo madio indrindra,' 'Kilasy tsy nahomby indrindra', 'mpianatra tranainy indrindra nahazo diplaoma,' 'Tapakilan'ny fijanonana kely indrindra,' 'Tsy dia nahasarika,' 'Azo inoana fa nilatsaka Nivoaka ny oniversite. ”
Azonao ilay hevitra.
Saingy tsy ny mpianatra any amin'ny lisea rehetra no superlatif. Ny ankamaroany dia salanisa fotsiny. Izy ireo dia mitovy tsara amin'ny olon-drehetra.
Tiako ny mpampianatra. Ny mpampianatra dia anisan'ny olona tiako indrindra eran'izao tontolo izao. Nanova ny fiainako ara-bakiteny ny mpampianatra. Fa ny ankamaroan'ny mpampianatra dia tsy mahery fo.
Matetika ny mpampianatra dia tia mampianatra, tia ny mpianatra ary tia mandray karama isam-bolana ho an'ny fampianarana. Mety ho mendri-kaja izany. Mendri-piderana mihitsy aza. Fa tsy mahery fo izany.
Mpampianatra mampianatra ao an-tanàna anaty, izay tsy mahavidy fiara, tandindomin-doza ny ainy rehefa mandeha an-tsekoly izy ireo, izay mampianatra ireo mpianatra izay tsy te hianatra foana, ary izay mahazo vola ampy hividianana gourmet indraindray sandwich. MAHAYRA IZANY! Manantena aho fa ankasitrahanay ny fahasamihafana.
Moa ve isika nanamora ny fiheverana ny maherifo amin'ny fanaovana ny olon-drehetra ho mahery fo? Moa ve noho ny tsy fahampian'ny mahery fo amin'ny andro maoderina - ny vahaolana dia ny hahatonga ny olona rehetra ho mahery fo?
Ilay mpanao hatsikana amerikana Will Rogers indray mandeha dia nanao fanamarihana lehibe. Hoy izy:
Tsy afaka ny ho mahery fo isika rehetra, satria misy olona tsy maintsy mipetraka eo amoron-dàlana ary mitehaka rehefa mandalo izy ireo.
Fantatr'i Rogers fa tsy mahery fo ny ankamaroan'ny olona. Izay ny ankamaroan'ny olona tsy afaka mahery fo. Ny ankamaroantsika dia salanisa tsotra izao. Mahalana ny maherifo. Izany no antony anaovantsika ny matso ho azy ireo.
RAHA rehetra mahery fo, avy eo tsy misy olona dia mahery fo. Mahalana ny maherifo amin'ny famaritana. Ny maherifo dia tsy mahazatra. Mahagaga ny maherifo. Ny olon-drehetra tsy afaka miavaka. Vitsy ihany no mety hahagaga.
Mampiavaka ny tena mahery fo
Ka izao dia hitantsika izay maherifo iray tsy , andao jerena izay mahery fo dia. Izany hoe, inona no mampiavaka ny tena mahery fo? Inona no mahatonga ny mahery fo?
Aza matahotra mihitsy, mbola misy ny tena mahery fo. Fa mitombina ihany raha toa ka tokony mahafeno fepetra sasany ny tena mahery fo.
Ireto misy 6 toetra mampiavaka ny a tena mahery fo.
1. Ny tena mahery fo dia manompo ny hafa
Ny tena mahery fo dia olona manao zavatra maherifo ho tombontsoan'ny hafa. Ho tombontsoan'ny olon-kafa ankoatry ny tenany.
Izay tsy midika fa ny mahery fo dia tsy afaka mandray soa amin'ny herim-pony manokana. Fa ny asany na ny asany na ny zava-bitany na ny zava-bitan'izy ireo dia tsy natao hahasoa azy ireo manokana. Tsy tia tena izy ireo amin'ny fanompoana azy ireo - fa tsy mizaka tena.
2. Miavaka ny Maherifo Marina
Ny tena mahery fo dia tsy olona tsotra manao zavatra mahazatra amin'ny fomba mahazatra. Tsy toa ny olon-drehetra izy ireo.
Samy hafa izy ireo.
Be herim-po izy ireo rehefa mihorohoro ny hafa. Mahery izy ireo rehefa malemy ny hafa. Tapa-kevitra izy ireo rehefa miala ny hafa. Voafehy izy ireo rehefa kamo ny hafa. Manao tsara izy ireo raha ny hafa kosa manao ratsy.
Maherifo ny miaramila sasany. Tsy izany anefa ny ankamaroany. Miaramila ny sasany satria tsy mahita asa tadiavin'izy ireo tombony ary manantena izy ireo fa hanatrika ny oniversite amin'ny volavolan-dalàna GI. Tsara izany ary tsy tokony hatao ambanin-javatra.
Saingy ny olona iray dia tsy mahery fo amin'ny maha-miaramila azy. Tsy maintsy manao zavatra mahery fo izy ireo amin'ny maha miaramila mba hahafeno fepetra ho maherifo.
Ditto ho an'ny mpitandro ny filaminana. Ho an'ny dokotera. Ho an'ny mpampianatra. Ho an'ny mpitsabo mpanampy. Ho an'ny mpamono afo. Ho an'ny mpanamory fiaramanidina.
inona no dikan'ny hoe miadana raha ny zazavavy
Misy mahery fo mety hitranga amin'ireo asa REHETRA ireo. Saingy tsy mahery fo izy ireo amin'ny alàlan'ny maha-ANATANA ireo asa ireo. Mahatalanjona ny tena mahery fo.
3. Ny tena mahery fo dia miatrika risika ary fatiantoka mety atrehana
Mety hitera-doza ny tena mahery fo. Ny tena mahery fo dia manao zavatra mety handany azy ireo amin'ny sehatra manokana.
Mety hiteraka fahavoazana ho azy ireo izany. Mety tsy maintsy mamono zavatra sarobidy izy ireo. Mety hamoy ny ainy aza izy ireo amin'ny asany mahery fo. Saingy vonona ny handray an'io loza io izy ireo.
Ny tena mahery fo dia vonona ny hanao risika amin'ny anaran'ny hafa. Raha manandrana mianika tendrombohitra aho dia mety hianjera avy any amin'io tendrombohitra io ary ho faty. Tsy loza mitatao amin'ny herim-po io, raha ny tenany.
Ny risika mahery setra iray dia mety hanao vivery ny aiko mba hamonjy hafa mpihanika tendrombohitra. Ny tena mahery fo dia miatrika loza mety hitranga amin'ny hafa.
4. Tena mahafoy tena ny tena mahery fo
Ny tena mahery fo dia vonona ny handoa vidiny manokana mba hahazoan'ny hafa tombony. Ny tena mahery fo dia tsy manao zavatra izay ahazoan'ny tsirairay tombontsoa fotsiny. Ny tena mahery fo dia mahafoy tena. Ireto misy ohatra:
Martin Luther King, Zanany
Misy an-jatony maro hafa azontsika tononina. Mahafoy tena ny maherifo. Izany no toetra iray mahatonga azy ireo ho mahery fo.
5. Be herim-po ny tena mahery fo
Ny tena mahery fo dia mety matahotra toy ny olona manaraka ihany. Ny tena mahery fo dia mety hahafantatra ny loza atrehin'izy ireo amin'ny olona manaraka. Mihetsika anefa izy ireo na dia eo aza ny ny tahotr'izy ireo.
Tsy kilasy olombelona manokana izy ireo izay tsy voahaja amin'ny fironana mahazatra hatahotra manoloana ny loza. Matahotra koa ny tena mahery fo!
Saingy manao zavatra ihany izy ireo. Fantany tsara fa miandry ny loza, izy ireo ihany no mandroso. Mahery fo ny fiatrehana ny tahotrao sy ny fanetsehana amin-kerim-po.
6. Matetika ny tena mahery fo dia manetry tena
Ny ankamaroantsika dia hantsoina hipetraka eo amoron-dàlana ary hitehaka rehefa mandalo ireo mahery fo. Tsy maninona. Ny tena mahery fo dia mankasitraka ny voninahitra natolotra azy ireo tamin'ny zavatra nataony. Fa ny ankamaroan'ny tena mahery fo dia mazàna manetre tena .
Faly fotsiny izy ireo fa afaka nanompo tamin'ny fomba sasany. Matetika ny maherifo marina no tsy mahazo laza. Ny tena mahery fo dia tsy mahita ny tenany ho mahery fo foana.
Amin'ny lafiny sasany, dia vao mainka mahery fo izy ireo. Sarotra ny mitia sy mankafy mahery fo miavonavona sy miavonavona. Ny 'Hero Arrogant' dia toa oxymoron, sa tsy izany?
Ahoana no hijanonana amin'ny fihazakazahana ireo olanao ary hiatrehana azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra feno fahasahiana
Ahoana no hahitana ny maherifonao anaty
Rehefa miroso amin'ity fizarana manaraka ity isika dia mety hahatsapa fa hanohitra mafy ny tenako aho. Nandany izany rehetra izany aho tamin'ny fanaovana tranga ho an'ny mahery fo izay miavaka. Tsy dia fahita izany ary sarotra hita. Ny ankamaroan'ny olona, ​​ao anatin'izany ny tenantsika, dia tsy mahery fo ary tsy ho iza intsony.
Ka inona izany momba ny fitadiavana ny HERO INNER an'ny olona iray?
mariky ny fisarihana lehilahy
Fanontaniana lehibe. Mamelà ahy hanazava. Na dia vitsy dia vitsy amintsika aza no ho mahery fo amin'ny lafiny avo indrindra, isika rehetra dia afaka mahita zavatra ao anatiny na manao zavatra izay maneho deraina, mendri-piderana, mahafa-po ary mendrika hankalazana kalitao. Na dia amin'ny ambaratonga kely aza.
Afaka mahita ny 'maherifontsika anaty' daholo isika, na dia tsy soratana miaraka amin'ny renivohitra 'H.' aza ny maherifo.
1. Manaova asa tsy mahafinaritra iray isan'andro.
Samy manana asa sarotra sy tsy mahafinaritra isika rehetra ka aleontsika esorina. Tsy te hanao azy ireo fotsiny isika. Ka tsy manao izany izahay.
Fa ity misy fotoana ahafahana mamoaka izany maherifo kely anaty ao aminao izany. Ataovy fotsiny ilay asa . Na dia tsy tianao aza. Na dia aleonao manao zavatra hafa rehetra.
Tadiavo isan'andro io asa io - ary ataovy izany! Ho hitanao fa miaina kely ny hatezerana maherifo ianao. Ho faly ianao fa nanao an'ity zavatra ity. Ary na dia tsy tena mahery fo aza izany dia hahatsapa ho mahery fo ianao amin'ny fanaovana azy.
2. Safidio ny tsy hanao zavatra NEGATIVE mirona hataonao.
Alaim-panahy hanao zavatra izay fantatsika fa tsy tokony hataontsika isika rehetra. Isika rehetra. Eny, na ianao aza. Eny, na izaho aza.
Fa aleo manao an'ity zavatra ity dia nosarihana ianao hanao, misafidy ny tsy hanao izany. Aza manao an'izany telefaona izany. Aza manoratra izany mailaka izany. Aza mandefa izany taratasy izany. Aza milaza an'izany zavatra izany.
Aza atao izany zavatra izany - na inona izany na inona - izay misy vokany ratsy aminao na amin'ny hafa.
Na dia mety te hanao izany aza ianao dia aza atao. Hahatsapa ny sasany amin'ireo vibe mahery fo ianao manako ao anatiny. Ho tianao izany.
3. Misafidiana hanao zavatra POSITIVE izay tsy mirona aminao hanao.
Ity iray ity dia ny corollary an'ilay teo aloha. Ny zavatra sasany izay mazàna ataontsika ho azy izay tokony hialantsika. Ireo zavatra hafa mirona tsy hataontsika izay tena tokony hataontsika. Ka ataovy izay zavatra tianao tsy atao.
Soraty io taratasy efa nesorinao io. Ataovy izay antso an-tariby fantatrao fa ho sarotra na tsy hahafinaritra. Manehoa hatsaram-panahy amin'izay olona midina izay mbola tsy tsara fanahy taminao.
Atombohy ny mihinana tsara kokoa ANAO. Atombohy ny fanatanjahan-tena IZAO. Manomboha manadio ny garazy IZAO. Manomboha mandamina ny volanao IZAO.
Ho hitanao fa raha vao manomboka ianao rehefa mandresy ny tsy fahatokisan-tena raha vao tafavoaka ny teboka farany, dia ho voatosika mafy hamita ilay natombokao.
Izay hahatonga anao ho karazana maherifon'ny ligy madinidinika. Tsy maninona. Aleo miditra amin'ny ligy kely toy izay tsy ligy mihintsy.
4. Andramo ny zavatra tadiavinao hatrizay, fa tsy nanao izany mihitsy.
Mety ho somary manokana sy tokana ho antsika tsirairay avy io. Tsy tokony ho zavatra lalina toa ny fanombohana ny orinasanao manokana izany. Na mihazakazaka marathon rehefa tsy nihazakazaka tamina fikasana matotra hatramin'ny fialantsasatry ny sekoly fanabeazana fototra. Na mividy sambo sambo ary mandeha sambo manerana ny Atlantika.
Mety ho somary nampatahotra ireo tamin'izay. Ka mandehana amin'ny zavatra somary sarotra loatra. Atombohy amin'ilay tantara novakinao foana fa hanoratanao indray andro any. Mamandriha fitsangatsanganana hafahafa ary mitsidika ireo toerana mahaliana. Mialà amin'ny tanàna nonenanao hatrizay.
Ianaro ny fomba fahandro tena tsara. Mianara mitendry zavamaneno. Mianara fahaiza-manao vaovao. Manaova fitsangantsanganana matotra. Ianaro ny fomba manidina fiaramanidina.
Betsaka ny zavatra tadiavinao hatao nefa tsy nataonao mihitsy. Toy izany koa ny iray amin'izy ireo. Hanampy anao hahita ny maherifonao anaty izany.
5. Ampio olona mivoaka amin'ny fomba azo tsapain-tanana.
Hisy foana ny olona manodidina anao amin'ny karazana filana ilaina. Mety misy olona manodidina anao mila filàna mitovy amin'ny iray nanananao taloha. Jereo hoe inona izany filana izany ary ampio hahavita izany. Na inona izany na inona.
Mampientam-po indrindra ny mahita filàna azonao hihaona amin'ny fampiasana fahaizana manokana na fahaizana anananao. Dia tsy ho asa fanompoana fotsiny izany fa mety hankafizinao koa. Tadidio fa mahafoy tena ny maherifo. Noho izany dia afaka ny ho tonga maherifo kely ianao amin'ny alàlan'ny serivisinao feno fahafoizan-tena.
6. Jereo hoe inona no mampirehitra anao rehefa manao izany ianao ary manao an'io zavatra io.
Isika rehetra dia manana zavatra amin'ny fiainantsika izay mandrisika antsika. Mampirehitra antsika izany. Mampientana anay izany. Manome hery antsika izany. Maninona raha manenjika ny iray amin'ireo zavatra ireo?
Raha zavatra mety ho lasa mahay indrindra ianao dia vao mainka tsara kokoa. Hey, ny olona dia nanangana asa fanatontosana amin'ny alàlan'ny fikatsahana fotsiny ny filan'ny nofo . Andramo io. Izy io dia hanampy amin'ny famoahana ny maherifonao anaty. Mety hahita làlana vaovao mihitsy aza ianao amin'ny fiainanao.
Ny ankamaroantsika dia tsy ho mahery fo mihitsy. Maherifo amin'ny fiainana marina marina amin'ny tsara. Azo antoka fa tsy ho mahery fo amin'ny folklore sy angano isika. Ny ankamaroantsika dia hiaina fiainana tsotra fotsiny. Fiainana izay mety hahafaly, mahaliana, mahafinaritra ary voatahy - fa tsy mahery fo amin'ny lafiny mahazatra rehetra.
Tsara izany. Hitsahatra izany isika.
maninona isika no mandratra izay tiantsika foana
Saingy satria tsy afaka ny ho tena mahery fo isika dia tsy midika hoe tsy afaka ho mahery fo kely amin'ny fomba kely isika. Isan'andro. Mitadiava ny maherifonao anaty manokana. Atombohy amin'ny lisitra etsy ambony. Aza misalasala manampy amin'ny lisitra.
Mety mila mahery fo foana isika. Mety mila olona hotadiavintsika foana isika. Iza no nanao zavatra izay tsy haintsika na ny ankamaroan'ny hafa atao.
Na mety tsy nanararaotra mihitsy izy ireo. Na inona na inona. Azontsika rehetra atao ny mampiasa ny hozatry ny maherifontsika amin'ny ambaratonga kely. Ary tokony. Ka andao hiroso aminy, sa tsy izany?
Mandritra izany fotoana izany, angamba afaka manaiky hanajanona ny “Hype Heroes” isika. Andao hanome voninahitra marina mahery fo ary atsaharo ny manome ny satan'ny maherifo sy ny anarana hoe 'mahery fo' amin'ireo izay mahazatra kokoa noho ny mahery fo.
Reko fa nametraka zavatra toy izao: Andao hiezaka ny hitondra ny tenantsika amin'ny ambaratonga mahery fo, fa tsy hanova ny famaritana ny mahery fo mba hahafahantsika rehetra mahafeno fepetra.
ahoana no ilazana raha tianao ny olona iray
maninona ny vadiko no tezitra be foana amiko
ny toetran'ny namana tsara